Ukwenza ngokwezifiso i-KDE ngokweqile | Kusuka kuLinux
Yebo, lokhu okuthunyelwe engikulinde isikhathi eside, abantu abaningi bangibuza ukuthi ngingayiguqula kanjani i-KDE yami ukuze ibe kanjena:
1 Yenza ngokwezifiso i-KDE
2 I-Appmenu-GTK Opensuse 13.1
Iqiniso ukuthi lapho ngifuna ukuchaza, akuseyona itimu elula Bespin. Kuqhubeka kakhulu, uma ngibheka imvelo yami eningiliziwe yalezi zinhlobo zezinkinga.
Ngilungisa yonke into ukuze "ilingane itimu", kusuka kusayizi wefonti kubha yesihloko, ukuguqula isethi yezithonjana, ukuthi ngifuna noma cha ukuthi ngibe nabahlukanisi phakathi kwezinkinobho ze "toolbar", kanye ukuchaza lo msebenzisi ngomsebenzisi kunginika ubuvila obukhulu futhi kuyadina.
Ukwenza umbhalo othi "ukufaka" kuyinkimbinkimbi, futhi ngokubuka kwami, angifuni "ukuphoqelela" i-paradigm yami netimu yami, ngincamela ukukhombisa umsebenzisi ukuthi ngikwenze kanjani, ngikhombise ukuthi angawuthola kanjani umphumela ofanayo nowami, kodwa Ngokwenza lokhu, faka ukuthinta kwakho siqu.
Ukuthi bayakwenza noma bahlehlise ngendlela abathanda ngayo, ukuthi bayivumelanise nenduduzo nesitayela sabo, ngoba nakusasa umuntu ogqugquzelwe yilokho engikwenzile angenza okuthile engikuthandayo nami okungikhuthaza ukuba ngenze okuningi ukuguqulwa noma izinguquko.
Ngendlela efanayo, kwesinye isikhathi ngizozama ukwenza uhlobo oluthile lwe- "pack" ukufaka uma ufuna, itimu ngendlela elula "elula".
Kungokokuqala ngqa ukuhlela ividiyo ngakho-ke i-xD haha ​​exakile
Ngaphandle kwe-serenade eningi, lapha unevidiyo ye-1hr mayelana Kubuntu, lapho ngiqala khona kusuka ku-Kubuntu okuzenzakalelayo ngokuphelele futhi ngikhombisa ngokuphelele konke engikwenzayo (Futhi lokhu kufaka izinto mhlawumbe kwabaningi ezingasho lutho njengokuya ekhasini le-X nto nokulanda ingqikithi, ukwenza iphutha lapho ukopisha okuthile, njll. Njll i-xD) ukubashiya njengoba ngibashiya.
Le vidiyo ifaka nokuthukwa ngezikhathi ezithile, lapho ngenza iphutha kwesinye isixhumanisi noma ngikhansela ukulanda ngephutha xD
Ngemininingwane engcono ngincoma ukuthi ubuke wonke amavidiyo ngekhwalithi ephezulu kakhulu, ilungiswa ngokuchofoza esondweni, kuzilawuli zevidiyo
UTuto Bespin: https://blog.desdelinux.net/tutorial-personalizacion-kde-bespin-eyecandy/
Isihloko se-Bespin: https://blog.desdelinux.net/tema-bespin-para-kde-inspirado-en-osx/
I-Appmenu-GTK Opensuse 13.1
Kulungile-ke ngizoshiya enye ividiyo, ehambelana nokuthi ungalufaka kanjani uhlelo lokusebenza lwe-gtk olubusisiwe ku-Opensuse 13.1, ayihleliwe i-xD, futhi uxolisa umsindo, kufanele ngishintshe unamathisela oshisayo uye encwadini yokubhalela, lapho-ke uma uqala izinto eziningi, opholile wenza umsindo ocasulayo haha
Amaphakheji engiwafake endaweni yami siqu:
Uma kwenzeka amanye ama-distros noma engasebenzi, ungangeza umugqa ophakanyisiwe:
thekelisa UBUNTU_MENUPROXY = "libappmenu.so"
AmaNvidia Tweaks: https://wiki.archlinux.org/index.php/NVIDIA#Tweaking
Bekuyikho-ke lokho, njengoba ngingahambisani nalokho engikuthumele, kungenzeka ngenze okuthunyelwe okuningi okuqhubekayo kwalokhu, ngifaka izinto (njengokubuka kuqala. Ngihlela ukukhuluma kancane ngemisebenzi ngokwesibonelo, ne-conky ne-KDE) xD
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Yenza ngokwezifiso i-KDE ngokweqile
Kuyathakazelisa, ngoba ngifuna ukwenza ingqikithi, thayipha i-eOS KDE.
Ah cha, ngiyaxolisa, ngididekile ngalokhu okuthunyelwe, bengivele ngikusho lokhu komunye.
Umsebenzi omuhle kakhulu, yebo mnumzane, ngiyakuhalalisela ngokufudumele.
PS: Abafana banepipi kuthi amantombazane abe nesitho sangasese.
I-buffer kathathu yingoba ikunikeze ukudwengula i-kde 4.11, akunjalo? Ngivivinye uchungechunge lwe-nvidia 331 nge-kde yakamuva kuma-distros a-3 ahlukile futhi ngemuva kwemizuzu embalwa i-vsync iyeka ukusebenza.
Into ephindwe kathathu kungenxa yokuthi bengifuna ukuthi ngigcine kanjani i-fps, akunakuba ukuthi nge-gt540m ngibe ne-fps yehlela ku-18 lapho ngihambisa iwindi kakhulu, njll., Ngemuva kokusebenzisa konke lokho ukusebenza kukhuphuke kakhulu, manje ukuphela kwento ongayitshela ukuthi lapho i-hob iphumule futhi ngokuzumayo ngiyicele i-animation ye-Kwin ize yenze ushintsho, futhi ngibona okuncane okusalayo wamavidiyo angikaze ngibe nezinkinga. Kimi i-hardware yakho iqalekisiwe, wonke ama-distros aqhuma njalo kuwe xD
Angazi, ngisanda kuthenga i-nvidia gtx 650 futhi inkinga ibiku-kwin kuphela.
Kuyaxaka, isixhumanisi onginike sona sithi lokhu kuvele, nje «thatha engikuphawulayo, ngumakhi we-bespin haha, ungazama isiphakamiso asiphakamisayo lapho: v
Cha ayixazululiwe, esikushoyo ukuthi iyaphindwa futhi ikuqondisa kabusha kokunye:
@pandev anginayo leyo plate ngakho angikwazi ukukusiza kakhulu, uke wazama ukuthi yini umfana ayiphakamisayo ngokuthumela okuguquguqukayo? Abanye abantu ngezansi bathi ukwenza lokho kuxazulule inkinga, ngisacabanga ukuthi kuyinto engizoyifaka esithangamini
bekungangisebenzeli ngoba bengingaqondi ukuthi ngizoyibeka kuphi leyo layini XD!
@ pandev92 njengoba isho lapho kuzodingeka ukuthi wenze iskripthi ku ~ / .kde4 / env / nvidia.sh futhi uthumele okuguqukayo okucelayo (khumbula ukuyinika izimvume zokwenza), nasi isibonelo:
kusasa ngemuva kokudakwa, ngizozama i-XD
Okuthunyelwe okuhle okukhombisa ukuthi ungalufaka kanjani uhlelo lokusebenza lwe-GTK kufanele kukhombise ukuthi yi-GTK appmenu.
Ngakolunye uhlangothi, usebenzisa i-KDE kufanele wazi ukuthi ungakha idokodo lakho kusuka kuphaneli, ngaphandle kokusebenzisa izinhlelo ezinjengeConky.
Angazi noma awuwabonanga yini amavidiyo noma ubuqondiswa kuphela yimibhalo
1) kuvidiyo ye-appmenu ngisho ukuthi iyini futhi ngikhombisa konke engikufakayo nomphumela owukhiqizayo
2) kuvidiyo yokuqala, itheku lami yilokho nje… iphaneli ye-kde ene-icontask….
… Ngikulungiselele kahle kangangokuthi manje i-KDE yami isebenzisa imitapo yolwazi ye-GTK
Ngeke ngenze noma yikuphi kwalokhu, kodwa ngiyakuhalalisela kakhulu futhi ngiyabonga ngokuthatha isikhathi sakho wabelane futhi ukhulise umphakathi we-GNU / Linux ngalo msebenzi.
Sanibonani nonyaka omuhle.
Bengivele ngicabanga ukuthi kuzofanele ukuthi ufake i-Gentoo noma i-Funtoo, sengivele ngithole ubunzima, noma kunalokho isikhathi 🙂, ukuthi singasetshenziswa kahle kanjani kuyo yonke i-distro.
Kepha anginaso isineke sokubuka amavidiyo, ngenhlonipho efanele, amavidiyo amaningi othando futhi lokho kuhle kakhulu.
Ngishintsha isihloko lapho, ngafunda ukuthi ukuhlunga umsindo kungenziwa ngokuya ngomsindo esifuna ukuwuqeda, hhayi ukwenziwa, kepha kuyiseluleko esihle. Ngokuqina
Uff ngizothola ngokuhlunga umsindo, ukuhlela ividiyo nayo yonke leyo ndawo, ngiyazi kancane i-xD
Ngiyabonga kakhulu, qaphela amanye amathiphu 😀
Ngabe izosebenza ku-Debian Wheezy kde? Angikhumbuli ukuthi iyiphi inguqulo eyi-xD
Ngicabanga ukuthi uma i-xD
I-athikili enhle kakhulu, nginenkinga yokuhlanganisa i-gtk ngisebenzisa i-lxappearance, futhi ngazama nokuyisebenzisa njengezimpande, kepha ayisebenzi, ngicela ungitshele ukuthi uyenze yasebenza kanjani? Ngiyabonga.
Ekugcineni ngibe nesihloko esithi "adwaita" kanye nesizinda samawindi eBespin ngifaka umbala ofanayo. Manje anginayo ikhompyutha nami kepha uma ngikhumbula kahle umbala we-Adwaita u-EDEDED (uwuthola ngesikhethi sombala, nge-zukitwo ungenza okufanayo ungenza i-bespin ithathe umbala wangemuva we-zukitwo (lokhu isikhathi ngikwenze kanjena ngoba ukushintsha umbala wetimu ye-gtk kuphume ngaleso sikhathi futhi manje lapho ngiyizama futhi umugqa ebengiphawula ngawo awuzange uvele ngakho ngakhetha ukuthatha umbala we-adwaita noma i-zukitwo ku icala lokusebenzisa i-zukitwo)
Uqinisile impela, i-EDEDED, isivele ibukeka ingcono kakhulu, ngiyabonga ngosizo lwakho nangendatshana, ngiyethemba uzoqhubeka nezinye izindatshana ukumisa i-KDE. Ngiyabonga
Sawubona, maqondana ne- "damn" lxappereance engazange iqede ukusebenza nhlobo, ingeze omunye umsebenzisi futhi ngicabange kakhulu ngikwazile ukuwenza usebenze, manje uma ikhiqiza umugqa kumafayela
faka i - "/home/javier/.gtkrc-2.0.mine"
kanye ne- *** gtkrc2.0-kde4 ***
okufanayo lokhu kuya ekugcineni kwefayela.
Ngizamile ukuguqula leyo migqa ngqo ku / usr / share / themes / kepha i-bastard ayinginiki ibhola xD
Imoto yakwaGoogle, iLinux, ama-lasers, ukuzishayela nokuningi